बैंक अफ काठमान्डूको नाफा १ अर्ब ९३ करोड, लाभांश क्षमता कति ? - Bizpati
असार २६,२०७७ / ०८ : ४३
बैंक अफ काठमान्डूको नाफा १ अर्ब ९३ करोड, लाभांश क्षमता कति ?
बैंक अफ काठमान्डू Bank of Kathmandu Limited ले गत आर्थिक बर्ष १ अर्ब ९३ करोड खुद नाफा गरेको छ । आर्थिक बर्ष ७४/७५ मा बैंकले १ अर्ब ३२ करोड खुद नाफा गरेकोमा गत आर्थिक बर्ष बैंकको नाफा ४०.६७ प्रतिशतले बढेको हो ।
बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने १ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यस हिसाबले बैंकले १६ प्रतिशत सम्म लाभांश दिन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुरुपको रकम विनियोजन गरेपश्चात कायम हुने फ्रि प्रोफिट बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश वितरणमा उपयोग गर्न सक्दछ।तर नियामकीय पुनरावलाेकन र थप प्राेभिजन तथा विगतकाे संचित वितरणायाेग्य मुनाफाकाे आधारमा वास्तविक लाभांस क्षमता फरक पर्न सक्नेछ ।
हाल बैंकको चुक्ता पुंजी ८ अर्ब ६ करोड रहेको छ । ८२ अर्ब ९३ करोड निक्षेप संकलन गरेको बैंकको कर्जा लगानी ७१ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । यस अवधिमा बैंकको जगेडा कोष ५ अर्ब ९४ करोड रहेको छ। बैंकको ब्याज आम्दानी अधिल्लो बर्षको तुलनामा २३.३८ प्रतिसतले बढेर ३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा १.५ प्रतिशत रहेको छ ।